विश्वासको मत लिने घोषणापछि ओलीका विकल्प के-के ? — KhabarTweet::Nepali online news portal
ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कति रु विश्वासको मत पाएनन् भने के हुन्छ ? नेपाल पक्षले के गर्ला ? माओवादी केन्द्रले नै पनि विश्वासको मत कायमै राख्ला अथवा के गर्छ रु के ओली चुनावमै जान चाहन्छन् रु यही विषयहरुमा ओलीका के-के विकल्प छन् भनेर हामीले खोज्ने प्रयास गरेका छौ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत पुग्न १३६ सांसद चाहिन्छन्। एमालेका सबैले एकजुट भएर मत हालेको खण्डमा थप १५ सांसद भए पुग्छ ओलीलाई पुग्छ। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले मत दिँदा पनि विश्वासको मत पुग्ने अवस्था आउछ। उक्त पक्षले ओलीलाई मत दिने पक्कापक्की जस्तै छ। जसपा मात्र होइन राप्रपा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक(एक मत पनि ओलीले पाउन सक्ने सम्भावना छ।
बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा नेपाल पक्षका केही सांसदले मात्र पनि ओलीलाई मत दिएनन् भने ओलीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र दलको नेता ओली नै भएकाले संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसार ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था आउँछ।
ओलीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा मुलुक अन्ततः निर्वाचनमै जाने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्। अर्को पक्षले पनि तत्काल बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था देखिदैन। विश्वासको मत गुमाएमा उहाँ९ओली०को सरकार विघटन हुन्छ र संविधानको धारा ७६(३) आकर्षित हुन्छ। त्यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले ओली नेतृत्वकै सरकार बन्छु, प्राध्यापक केसी भन्छन्, उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चरणमा पनि उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन भने।
अन्ततः निर्वाचनमै जानुपर्ने हुन्छ। अबको निष्कर्ष भनेको निर्वाचनमा मुलुक जाने सम्भावना नै बढी देख्छु म।
ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका छन्। वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ। अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन कानुनी रुपमा फिर्ता लिएको छैन। ओलीविरुद्ध बहुमत पुर्‍याउन नसकेकै कारण कांग्रेस, माओवादी, जसपा ९बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्ष०ले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिरहेको छैन।
यही अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत लिँदैछन्। ओली आफैँले विश्वासको मत लिइरहँदा माओवादीले विश्वासको मत कायमै राख्‍ने सम्भावना कति हुन्छरु भन्ने कुरा पनि अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो। सबैभन्दा ठूलो नैतिक संकट अहिले माओवादीलाई पर्दैछ। अधिवक्ता तथा पत्रकार लोकेन्द्र ओली माओवादीले ओलीलाई समर्थन कायम राखिराख्‍ने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्। ओलीविरुद्ध बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाएपनि ओली आफैँले विश्वासको मत लिँन खोज्दा भने माओवादीले समर्थन कायमै राखिरहने सम्भावना नहुने उनको भनाइ छ।
विश्वासको मतमा फेल भएमा प्रधानमन्त्री ओली कामचालाउ भई अन्ततः निर्वाचनमा जाने स्थिति नै देखिएको अधिवक्ता ओलीले बताए। अब माधव नेपाल पक्षले साथ नदिएमा ओलीले विश्वासको मत गुमाउँछन्। अर्को पक्षले पनि यही अवस्थामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने देखिँदैन। त्यसो हुँदा सरकार कामचलाउ हुन्छु, अधिवक्ता ओलीले भने, ओली कामचलाउ भइसकेपछि पनि सरकार निर्माणको आह्वान त ओलीलाई नै गर्छ किनभने उ सबैभन्दा ठूलो दल हो। अन्ततः स्थिति चुनावमा जान्छ होला भन्ने लाग्छ।
ओली समूहका निकट एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको भनाइले पनि अब मुलुक चुनावतिर जाने संकेत देखिन्छ। अब बाह्रै महिना नै सरकारको विरोध गरी बस्ने जति सबैलाई आनन्द भो होला नि। मिसनवालालाई शुभकामना छु, नेता बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ओली हटाउन नसके वा जनतामा जानु परेमा फेरि उही किच(किच गर्ने हैन। उडाएरै हान्ने हो सुतेको ठाउँमा हान्ने शैली लोकतन्त्रमा काम छैन।फरक धारवाट